टोखा नगरपालिकाबाट होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितका लागि ४२ लाख खर्च « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
टोखा नगरपालिकाबाट होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितका लागि ४२ लाख खर्च
३ पुष २०७७, शुक्रबार १०:२२
काठमाडौं, पुस ३ । टोखा नगरपालिकाले कोरोना (कोभिड–१९) पोजेटिभ भएर होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीको पोषण भत्तास्वरुप रु. ४२ लाख नौ हजार १०० खर्च गरेको छ ।
काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखाको वि.सं २०७७ भदौमा बसेको ६२औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार हालसम्म ७९२ कोरोना सङ्क्रमित परिवारलाई सन्तुलित भोजनका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो ।
कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै टोखाको ६२औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकले कोरोना पोजेटिभ भई घरमा बस्ने बिरामीका लागि १४ दिनसम्म सन्तुलित भोजनका लागि प्रतिदिन रु. ३५० भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने एक परिवारको एक जना मात्र कोरोना पोजेटिभ भएर होमआइसोलेसनमा बसेकालाई १४ दिनको एकमुष्ट रु. चार हजार ९०० र एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति कोरोना पोजेटिभ भएर होमआइसोलेसनमा बस्नेलाई रु. सात हजार उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका आर्थिक शाखा प्रमुख ज्ञानबहादुर अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
टोखाले हालसम्म कोरोना पोजेटिभ देखिएर होमआइसोलेसनमा बस्ने ६०९ व्यक्तिलाई चार हजार ९०० का दरले रु. २९ लाख ८४ हजार १०० उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएर आइसोलेसनमा बस्ने १७५ परिवारलाई रु सात हजारका दरले रु. १२ लाख २५ हजार उपलब्ध गराएको छ ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपाल र काठमाडौ. उपत्यकामा प्रवेश गरेसँगै यसको असर टोखा नगरपालिकामा पनि सबैभन्दा धेरै देखियो ।
टोखा नगरपालिकामा काठमाडौंको महानगरपालिकापछि धेरै सङ्क्रमित भेटिएका थिए ।
नगरपालिकाले हालसम्म पाँच हजार ७४३ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा तीन हजार ५०२ जनाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको टोखा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रनलाल कुलालले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण हालसम्म टोखामा नौ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यस्तै आजको मितिसम्म आइपुग्दा ९८ सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
टोखाले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वयंसेवकको मनोवल उच्च राख्न ४४८ जनाको कोरोना बीमासमेत गरिदिएको छ ।
कोरोना बीमा गर्नेमा ६० जनप्रतिनिधि, १८२ कर्मचारी र २०६ कोभिड स्वयंसेवक छन् ।
टोखाले सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई रु. एक लाख बराबरको कोरोना बीमा गरेको हो ।
नगरपालिकाले हालसम्म कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि झण्डै रु. पाँच करोड रकम खर्च गरेको छ ।
कोरोनाटोखा नगरपालिकाहोम आइसोलेसन